डा. गोविन्द केसीको ब्यापक समर्थन,काठमाडौँमा चिकित्सकको र्याली एस्तो देखियो -भिडियो - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
डा. गोविन्द केसीको ब्यापक समर्थन,काठमाडौँमा चिकित्सकको र्याली एस्तो देखियो -भिडियो
सैनिक हेलिकोप्टरबाट डा. गोविन्द केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याइयो
३ श्रावण २०७५, बिहीबार १७:२७ July 19, 2018 Buddha Sharan
श्रावण ३ काठमाडौँ / डा. केसीलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौ ल्याइएको छ ।उहालाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरिने बताइएको छ । गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको माग गर्दै जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा नेपाल संघको आह्वानमा काठमाडौँमा बिहिबार माईतीघर मण्डला बात चिकित्सक तथा समर्थकले र्याली निकाले को छ ।
प्रहरीले डा केसी समर्थकमाथि अनसन स्थल जुम्लाको खलङ्गा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बलप्रयोग गरि लाठीचार्ज गर्नुका साथै अश्रुग्यास हानेको छ ।
लाठी चार्जबाट १ दर्जा भन्दा बदी विद्यार्थी तथा स्थानीय घाइते भएका छन् ।सरकारले डाक्टरहरुको टोलीसहित नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर पठाएको थियो । २० दिनदेखि अनसनरत डाक्टर केसी पछिल्लो समय स्वास्थ्य स्थिति बिग्रदै गएपछि थप उपचारका लागि स्तरीय अस्पतालमा राख्ने भन्दै सरकारले बिहिबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पठाएको थियो।
डा. गोविन्द केसी समर्थनमा काठमाडौँमा चिकित्सकको र्याली
डा. गोविन्द केसी समर्थनमा काठमाडौँमा चिकित्सकको र्याली ..
Posted by झीगु स: मंका स: on Thursday, 19 July 2018